Saddex qof oo mas’uul ka noqon karta in Real Madrid ay sameyso saxiixa Neymar Jr – Gool FM
Saddex qof oo mas’uul ka noqon karta in Real Madrid ay sameyso saxiixa Neymar Jr
(Madrid) 19 Maajo 2018. Inkastoo ay tahay xaalad aad u adag in Meymar Jr uu ka dhaqaaqo kooxda Paris Saint-Germain suuqa xagaaga ee soo aadan, hadana Real Madrid ayaa sii wadi doonta raacdada ay ugu jirto saxiixiisa.
Laakiin Los Blancos ayaa lagu soo waramayaa in ay garab weyn ka heli doonto shaqsiyaad qaar ee saameyn xoogan ku dhex leh kubada cagta si ay u hesho saxiixa Neymar.
Saxaafada dalka Spain ayaa maanta shaacisay in Real Madrid ay saddex qofood u adeesan doonto si ay kaga soo kaxeyso xidiga reer Brazil ee Neymar Jr dalka france isla markaana uu u yimaado caasimada Madrid ee dalka Spain.
Wargeyska “Marca” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in magacyada saddexdan shaqsi ay kala yihiin, Pini Zahavi, Juni Calafat iyo aabaha dhalay Neymar Jr. si ay suuragal kaga dhigaan imaatinka Neymar ee garoonka Santiago Bernabéu
Juni Calafat ayaa ah mas’uul Real Madrid u qaabilsan heshiisyada Brazil, waxaana lagu xasuusan karaa heshiiskii ay kooxda reer Spain suuragalisay ee reer Brazil Vinícius Júnior.
Real Madrid ayaa waxay ugu horeyn ay dooneysaa in ay dhameystirto heshiiska shaqsiyadeed ee Neynar Jr uu ku imaanayo Bernabéu, kadibna uu xidiga reer Brazil cadaadis ku saaro kooxdiisa PSG in ay ka iibiyaan Los Blancos.
WAR CUSUB: Ciyaartoyda muslimka ah ee ciyaaraya Final-ka Champions League oo loo sheegay inay AFURI karaan iyaga oo aan dambaabin!!
Xidig soo maray Tottenham oo yiri... “Jose Mourinho wuxuu hoos u dhigayaa tayada Marcus Rashford”